U-Mehlwana ufezekisa amaphupha akhe - HeraldLIVE
The Algoa Sun U-Mehlwana ufezekisa amaphupha akhe January 25, 2014
NGETHUBA oontanga baka Luvuyo Mehlwana abangaphangeliyo behleli emakhaya bekhalazela urhulumente ongabenzelinto, yena uthathele ikamva lakhe ezandleni zakhe.
U-Mehlwana, 24, ohlala e-NU8, uyintatheli, umthathi weefoto, aphinde abe ngumsasazi.
Uthe izifundo zakhe uzenze e-Intec College nase Media Workshop.
“Ndikhule kwikhaya elinomdla kwindaba ezidl’ umzi [current affairs] . Bendisithi nokuba ndifuna ukubukela inkqubo ehlekisayo [comedy], kube kubukelwe iindaba, okanye kumanyelwe u-Apha Naphaya,” utshilo u-Mehlwana.
“Ndawuqala lomsebenzi ndiwenzayo ekuqaleni kuka 2010.
“Kwakunzima kakhulu ekuqaleni, ndingenayo ne-computer, ne-camera – kodwa ndinazo ngoku.
“Izinto endizibhalileyo neefoto endizithathileyo ndizisa emaphepheni alapha eBhayi.
“Ndisaceba ukuvula inkampani yam, kodwa andifuni ukukhwaza ndingekaphumi ehlathini,” utshilo.
UMehlwana ukwanguye nomsasazi wezemidlalo kwinkqubo yasekuseni i-Morning Express (Khwela-Khwela Sowubhatele) kwisikhululo i-EHFM, ukusuka ngentsimbi yesithandathu ukuya kwe yethoba.
“Ubuchule ebomini kuku nyamezela, uzibekele ixesha ecaleni lokufumana into oyifunayo, [kwaye] uzixelele ukuba awusayikungxama.”